Exclusive Chhattisgarh Tour | Dana @ + 91-993.702.7574 Kuti Uite.
Nyika inenge ichangobva kuumbwa yakagadzirwa kubva kuMadhya Pradesh, Chhattisgarh ihurumende ine masango akaoma uye masango akanaka. Iri munyika yose inozivikanwa nokuda kwehupfumi hwakawanda hwemigodhi uye zvisikwa zvepanyika. In Chhattisgarh, iwe unogona kuona maAkale Makore, mazhinji emvura (yakakurumbira iri muChitrakoot, Tiratgarh, Mandawa, Chitrashara, Thamada, Ghumar, Bodhghat, Dantewada, Kanker, Koriya nezvimwe zvizhinji), mapurisa, temberi, uye tsika dzemarudzi. Iko Exclusive Chhattisgarh Tour ichakupa mukana wekuongorora nzvimbo idzi dzose nezvimwe. Rakazara nezvikumbaridzo zvekare, zvisikwa zvisingasviki zvemhuka, temberi dzakavezwa zvakavezwa, nzvimbo dzeBhudha, dzimba dzepamambo, mapako, mapikicha ematombo uye makomo emakomo. Nzvimbo idzi dzakawanda hadzina kutaridzirwa uye dzisina kudzidza uye dzinopa ruzivo rwakasiyana uye ruzivo kuvashanyi, zvichienzaniswa nenzvimbo dzetsika dzave dzakawanda. Ne Exclusive Chhattisgarh Tour, iwe uchasvika kuti uongorore asina kudzidza. Hurumende ine hurumende yepamusoro yekukwikwidza kutashanyira, mitambo yemvura uye mufambiro nekuda kwemasango, mvura zhinji, temberi uye zvakasiyana-siyana zvemafuta nemhuka dzinowanikwa muChhattisgarh. Chhattisgarh inzvimbo inokosha zvikuru, ine zvakawanda zvokupa mufambi asina njere uyo anoda kubuda panzira dzakashamiswa. The Exclusive Chhattisgarh Tour ichakupa zvakanyanya kupfuura zvaunotarisira.
08 Nights Programme | Mutambo Wokushanyira: 011
ZUVA 01: ARRIVAL NEW DELHI
Taura paunosvika kuNew Delhi International Airport uye uende kune hotera. Zuva roga roga rakasununguka pamabasa avo pachavo. Usiku huno kuNew Delhi.
ZUVA 02: NEW DELHI - RAIPUR
Dhaira kuNew Delhi hoofsi yepayimusi kuti uende kunhandare yeRaipur. Kugamuchira paunosvika paRaipur yendege uye ozoenda kuhotera. Mushure mekuongorora-mushanyira kuSirpur Buddhist nzvimbo yekutsvaga nzvimbo. Usiku huno paRaipur.
ZUVA 03: RAIPUR - BHORAMDEO
Mushure mekudya kwekudya kwemazuva ekumhanya kuenda kuBhoramdeo. Shanyira misika yemunharaunda. Usiku huno paBhoramdeo. (Inofanira kuva Chitatu)
ZUVA 04: BHORAMDEO
Mangwanani mushure mekudya kwekudya kwekudya kwemajasi emunharaunda uye mushure mokunge masikati vashanyire Chilpi Weekly Tribal Market yeBaiga Tribes. Usiku huno paBhoramdeo. (Musika uri musi weChina)
ZUVA 05: BHORAMDEO - TAREGAON - KANKER
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kweTaregaon Market yeGond Tribes uye voenda kuKanker kushanyira Rajim & Champaran. Usiku huno paKanker. (Musika uri musi weChishanu)
ZUVA 06: KANKER - JAGDALPUR
Endai kuJagdalpur mushanyira Kondagaon Dhokra mumusha wakakanda uye Kidei Chappda Cast Iron musha webasa. Usiku huno paJagdalpur.
ZUVA 07: JAGDALPUR
Kushanyira mangwanani kweKanger Valley National Park uye Tirathgarh Waterfall. Mushure mekudya kwemasikati kweKitrakoot Water Fall (The Niagara Fall of India). Usiku huno paJagdalpur.
ZUVA 08: JAGDALPUR - RAIPUR
Dhaira kuRaipur kushanyira Pharasgaon Weekly Market uye mashoma emataundi ekuveza matanda munzira. Usiku huno paRaipur.
ZUVA 09: DEPARTURE
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwaRaipur mhirizhonga kuitira kuenda mberi.